ကျုပ်တို့ အသိုင်းအ၀ိုင်း | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » ကဗျာ » ကျုပ်တို့ အသိုင်းအ၀ိုင်း
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 6:27 PM
Posted by မိုးသက် at 6:27 PM Read more
mstint July 29, 2012 at 8:33 PM
ဘလော့ဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာလေးတွေ ထိထိမိမိလေးပါ မေမြို့မိုးရေ။
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် July 29, 2012 at 9:30 PM
အရမ်းကောင်းတဲ့ ကဗျာ အရမ်းမှန်တဲ့ကဗျာပဲမေမြို့မိုးရေ ။
Candy July 29, 2012 at 9:33 PM
ဖေ့ဘွတ်မှာ ဖတ်ပြီးသား ပြန်လာဖတ်သွားသည် ဒါပဲ :P
မောင်မောင် July 29, 2012 at 10:43 PM
စံပယ်ချို July 29, 2012 at 11:09 PM
ဟုတ်လိုက်လေခြင်းပါကွယ် ကောင်းလွန်းလို့ ဘာပြောရမလဲမသိတော့ဘူး
arealthu July 30, 2012 at 1:42 AM
သဘောကျသည်။ရန်ကုန်မှာတောင်ဆရာမမြသွေးနီတို.လုပ်ကျမယ့်ပွဲရှိတယ်ထင်တယ်။online mediaနဲ.printmedia အကြောင်းပြောကြမှာ။ငါ့မောင်ကဗျာလေးသာပြလိုက်ရရင်တော့လား။
အန်တီလေးမေခင် July 30, 2012 at 2:32 AM
မြတ်နိူးသူ(MUFL) July 30, 2012 at 2:35 AM
၀ိဝိ July 30, 2012 at 5:24 AM
blackroze July 30, 2012 at 10:29 AM
အဲသည့်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ တအိမ်တက်ဆင်းလိုက်လည်တက်တဲ့သူတစ်ဦးမှ နှုတ်ခွန်းဆက်သွားပါတယ်။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! July 30, 2012 at 1:05 PM
ဒီလိုနဲ့ပဲ...ဒီအသိုင်းဝိုင်းလေးထဲက ဘယ်တော့မှမထွက်သွားနိုင်ဘူးဆို ပိုမှန်မယ် မောင်လေး..:):)
နေမင်း July 31, 2012 at 6:33 AM
Sweety Snow July 31, 2012 at 8:58 AM
ဘလော့ဂ်ထိလိုက်ပြီး ထပ်ဖတ်သွားသည် :D
ဖြိုးဇာနည် August 1, 2012 at 8:01 AM
ပြုံးမိတယ် ပြီးတော့ အရမ်းကြိုက်တယ်ကွာ
ကိုတူး August 1, 2012 at 10:55 PM
မြတ်ကြည် August 2, 2012 at 4:20 AM
မြသွေးနီ August 3, 2012 at 3:09 AM
ဘလော့ဂါလူငယ်များရဲ့ ရင်ဘတ်များစွာကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကဗျာ...။
အလွမ်းခရီးသည် August 3, 2012 at 7:53 AM
ဒီည မေတင်လိုက်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ကန့်ကွက်ပေးတာလေးကို ကျေးဇူးပြုပြီး ဝင်ဖတ်ပေးပါ။ ရှယ်ပေးပါ။ ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ပေးပါ။
တွတ်တွတ် August 8, 2012 at 2:10 AM
ဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းလေးထဲ...အံဝင်ဂွကျဖြစ်ဖို့..ကြိုးစားနေရင်း...ချွတ်ချော်တိမ်းစောင်းမှုများနဲ့..ဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ အထာကျဖို့....အကွက်ရွှေ့နေရတဲ့...ကျောက်မဲက.၀ိုင်းတော်သားတစ်ဦးကလဲ..လာရောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲအားပေးသွား ပါတယ်ဗျာ....
13boot kg September 10, 2012 at 6:36 PM
စာမူခ မစ ခဲ့ပါတယ် ဗျာ.......
ရှယ်ယာ လည်းလုဎ်သွားပါတယ် မေမြို့မိုးရေ့.............!
ညိမ်းနိုင် October 15, 2012 at 10:39 PM
" တော်လို့မဟုတ် ၊ ပျော်လို့မဟုတ်....တတ်လို့ မဟုတ် ၊ ငတ်လို့မဟုတ်....." ရေးချင်လို့ရေးတယ်... :P
အလကားစတာ.... ဘလော့ဂါတွေရဲ့ ရင်ကိုထင်ဟပ်တဲ့ ကဗျာလေးပဲ ညီ....ကောင်းတယ်ဗျား...........။